TSAHO MIELY MOMBA NY HOPITALIM-PANJAKANA : Mampihena ny tahan’ny olona mamonjy toeram-pitsaboana
Manoloana ny resa-be niely tany amin’ny tambajotran-tserasera sy gazety ary haino aman-jery sasan-tsasany, nitsikera ny fomba fiasan’ireo mpitsabo any amin’ny hopitalim-panjakana na koa hopitaly tsy miankina dia nitondra fanazavana ny filohan’ny holafitry ny mpitsabo, ny dokotera Eric Andrianasolo. 20 mai 2019
Nambaran’ity farany fa maro ny fanenjehana hopitaly sy mpitsabo ao amin’ny fesiboky tato ho ato. Ny fisian’ireny tsaho miely sy vaovao tsy marim-pototra ireny anefa dia mampihena ny taham-pahavitrihan’ny marary manatona toeram-pitsaboana. Voalaza fa nihena 10 ka hatramin’ny 25 isan-jato ny tahan’ireo olona mamonjy hopitaly noho ireo antony ireo. Ny fahatarana amin’ny fidirana hopitaly sy ny fitadiavana vahaolana hafa ankoatry ny fitsaboana omen’ny dokotera anefa dia mainka mitarika fahasarotana amin’ny aretina.
“Ekena, misy antony mahatonga ny olona mitsikera ny tsy mety ao fa tsy ny rehetra no manao ny tsy mety”, hoy ny fanambaràna avy amin’ny filohan’ny holafitry ny dokotera. Nomarihiny ihany koa fa samy manana ny fandaminana napetrany ny tobim-pahasalamana rehetra na miankina io na tsia fa na izany aza dia misy kosa ny zon’ny marary tsy maintsy hajaina.
Zon’ny marary ny mahalala ny fitsaboana atao aminy. Raha hodidiana izy, ohatra, dia omena azy ny fanazavana momba ny mety ho fizotran’ny fandidiana, ny anton’izany, ny vokatra andrasana ary raha ilaina dia ny zavatra hafa mety hitranga. Zon’ny marary koa anefa ny mandà io fitsaboana io ary tsy azo terena izy. (Raha tsy hoe tsy tompon’ny tenany izy na koa vonjy aina no atao aminy.) Nohazavain’ity filohan’ny holafitry ny dokotera ity ihany koa fa raha any amin’ny toby tsy miankina dia manan-jo ny marary hisafidy ny dokotera hitsabo azy fa noho ny fandaminana kosa dia izay miasa iny andro iny no mandray amin’ny hopitalim-panjakana indrindra moa fa vonjy aina. Raha misy noheverina fa fahadisoana na tandrevaka nataon’ilay mpitsabo na ny hopitaly dia zon’ilay marary ny mangataka fanazavana amin’ny tompon’andraikitra, na ny minisitera, na amin’ny holafitra misy ilay mpitsabo.
Eo matetika no manahirana indrindra, hoy ny dokotera Eric Andrianasolo satria rehefa tsy ampy ny fanazavana nomena mialoha ilay marary noho ny antony maro samihafa na ny tsy fisian’ny olona natokana hanao ny serasera toy ny “assistante sociale” dia tsy tafita io fanazavana io na koa mety ho diso ny fandraisan’ny mpanjifa azy ka miteraka fahasorenana ho an’ny marary sy ny mpanjifa. Misy koa faritra na efitra tsy azon’ny mpanaraka marary idirana, toy ny efitra sasany ao amin’ny sampan-draharaha famelonan’aina sy ny efitra fandidiana. Ferana ny isan’ny mpiandry marary satria mbola tsy vitan’ny hopitaly irery ny mikarakara ny marary eto Madagasikara.
Ankoatra ireo dia manampy trotraka amin’ny fahasarotan’ny fitsaboana atao ihany koa ny fisian’ny kolikoly. Na ny manome tsolotra na ny mpandray dia samy voafaoka ao anatin’io resaka kolikoky io avokoa satria tsy misy ny “mpandray” raha tsy misy ny “mpanome”, samy tompon’andraikitra ny rehetra. “Efa misy sampan’asa voatokana amin’ny fandraisam-bolan’ny hopitaly ary ny fanafody rehetra dia any amin’ny farmasia no vidiana ary mahazo rosia ara-dalàna ny mpividy ka tsy tokony halaim-panahy hanao kolikoly.” “Tsy tokony ho adino koa ny tsiambaratelon’ny fitsaboana mba hiarovana ny zon’ny marary.
Tsy azo atao ny maka sary na feo amin’ny fizahana marary. Isika Malagasy dia mandala ny fihavanana hatrany ka raha sanatria re ka nisy tsy fahafaham-po dia aleo manatona ireo tompon’andraikitra miresaka fa izay ihany no hahafahantsika rehetra miroso amin’ny fanatsaràna ny asa”, hoy hatrany ny fanazavana sy fanentanana nataon’ny filohan’ny holafitry ny mpitsabo.
"Salama sy matanjaka tsara ny tenako ary tsy mitsoaka ady " NAMALY NY TSAHO ANENJEHANA AZY RAJOELINA (162) 2 juillet 2020 "Mbola betsaka ny kolikoly tsikaritra eny amin’ny sakana ara-pahasalamana" VOIFIRAISANA (68) 2 juillet 2020 Sekoly tsy miankina iray eny Ambatolampy Antehiroka tsy manara-dalàna FEPETRA COVID-19 (62) 30 juin 2020 Distrika maro no efa misitraka fampandrosoana FAMPANANTENANA NATAON’NY FILOHA (56) 2 juillet 2020 Mbola tsy raharahian’ny vahoaka ny Covid-19 FAHASALAMANA AO MAHAJANGA (56) 2 juillet 2020 Zaza 15 volana sy olon-dehibe roa indray voan’ny Covid-19 FARITANIN’I MAHAJANGA (55) 30 juin 2020